नि’र्म’ला प’न्तको ह’त्या’रा सै’निक ज’वान ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारनि’र्म’ला प’न्तको ह’त्या’रा सै’निक ज’वान !
नि’र्म’ला प’न्तको ह’त्या’रा सै’निक ज’वान !
कञ्चनपुर । क’ञ्चनपुरको भी’मदत्तनगर–२ की १३ वर्षीया नि’र्म’ला पन्त’को ब’ला’त्का’र’पछि ह’त्या प्रकरणमा साढे दुईवर्ष बि’तिसक्दा पनि प्रहरी अ’भियु’क्तसम्म पुग्न सकेको छैन । ‘क्लु’ फे’ला नपर्दा प्रहरी अ’भियु’क्तसम्म पुग्न नसकेको हो ।
०७५ साउन १० गते साथीको घर गएकी नि’र्म’ला साउन ११ गते उ’खुबारीमा मृ’त अवस्थामा फेला प’रेकी थिइन् । उनको ब’ला’त्का’र’पछि ह’त्या भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खु’लेको थियो ।तर साढे दुईवर्ष बि’ति’सक्दा पनि घ’टनामा कसको सं’लग्नता थियो भन्ने खु’ल्न सकेको छैन ।
प्रहरीले ०७५ भदौ ४ मा भी’मदत्तनगर १९ बाँ’गफाँ’टाका ३९ वर्षीय दि’लिपसिं’ह वि’ष्टलाई मु’ख्य अ’भियु’क्तको रुपमा सार्वजनिक गरेको थियो । तर उनको डी’ए’न’ए म्या’च न’भएपछि छु’टेका थिए । त्यसबाहेक प्रहरीले अन्य के’हीलाई समेत पक्राउ गरेको थियो ।
घ’ट’नामा सं’लग्नताको प्र’माण फेला नपरेपछि प्रहरीले आ’शंकाको भ’रमा पक्राउ गरेकाहरू छु’ट्दै आएका छन् । हालसम्म प्रहरीले नि’र्म’ला ह’त्या अ’नुसन्धान प्र’करणमा ८० जना ब’ढीको डी’ए’न’ए प’री’क्षण गरिसकेको छ । जसमा केही से’नाका ज’वा’नको पनि न’मुना संकलन गरिएको छ ।
अ’नुसन्धानमा सं’ग्लन अ’धिकारीहरुका अनुसार प्रहरी अझै शं’का’स्पद व्यक्तिहरुको डी’ए’न’ए’कै खो’जीमा छ । केही शं’का’स्पद’हरुको न’मुना परीक्षणका लागि पठाइएको छ । अनुसन्धानको दा’यरामा से’नाका ज’वा’नदेखि न’जिकका आ’फन्त, अ’प’रा’धिक पृ’ष्ठभूमिका व्य’क्ति’लगायतलाई राखिएको छ ।
नि’र्म’ला’को श’व भेटिएको स्था’नभन्दा वर म’हेन्द्र’नगरतर्फ जाने बाटोमा सेनाको ब्या’रे’क पनि छ । अझै प्रहरीले केही सेनाका ज’वानलाई नि’गरा’नीमै राखेको एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।अ’नौ’पचारिक कु’राकानीमा प्रहरीका उच्च अ’धिकारीहरु भन्छन्, “प्रहरी इ’तिहासकै ठूलो स्रो’तसा’धन र ज’नश’क्ति प’रिचालन गरेर हा’मी अनुसन्धानमा जु’टेका छौं ।
कहिलेकाहिँ शं’कास्प’द व्यक्ति फे’ला पर्छन् तर प्र’माण जु’ट्दैन । म्या’नु’अ’ल प’द्धतिमै अनुसन्धान गर्नुपर्ने बा’ध्य’ता छ । तर पछिल्लो समय केही नयाँ क्लु फे’ला परेका छन् ।”यसअघि सु’रुवाती समयको अनुसन्धानमा ख’टिएको अनुसन्धान टो’ली ब’र्खा’स्त र नि’लम्ब’नमा परेपछि गएका सबैजसो प्रहरी अधिकारीले दि’लि’प वि’ष्ट’को सं’लग्न’तालाई अ’स्वी’कार गर्दै आएका छन् ।
नि’ल’म्ब’न र ब’र्खा’स्ती’मा परेका प्रहरीले अ’दालतबाट स’फा’ई भने पा’इसकेका छन् । केही समयअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले अनुसन्धानमा ख’टि’एका प्रहरी अधिकारीसँग छ’लफल गरेको थियो । अ’नुसन्धानमा ख’टिएका प्रहरी अधिकृतकै म’त भने आ’पसमै बा’झिँदै आएको छ ।
तर हालसम्म ख’टि’एका सबै अनुसन्धान टोलीले घ’टना’स्थल उ’खुबा’री नै भएको प्रहरीले नि’ष्कर्ष नि’का’ले पनि ह’त्यामा कसको सं’लग्न’ता थियो भन्ने ‘क्लु’ भेट्टाउन सकेका छैनन् । नि’र्म’ला ह’त्या’का’ण्ड’को अनुसन्धानमा प्रहरीको के’न्द्रीय अनुसन्धान ब्यू’रोका डी’एसपीको क’मा’ण्ड’मा टो’ली का’र्य’रत छ ।
सुरुदेखि नै अनुसन्धानमा सी’आई’बीको टो’ली स’क्रिय छ । हालसम्म एक हजारको हा’राहा’रीमा शं’कास्प’द व्यक्तिको ब’यान लिने, नि’गरा’नी राख्ने, कल डि’टे’ल हेर्ने, डी’ए’न’ए परीक्षण ग’र्नेलगायतका काम गरिएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।अनुसन्धानकै क्रममा नि’र्म’ला’को गाउँ आ’सपासमा २ हजार बढी घ’रको ल’गत सं’कलन समेत गरिएको थियो ।
साउन १० अघि कहाँ थिए, उनीहरुको पृ’ष्ठभूमि वा पेशा के हो, साउन १० पछि घर छा’डेर वैदेशिक रोजगारी वा भा’रतमा को–को गए लगायतका विवरण प्रहरीले सं’कलन गरेको थियो । ब’ला’त्का’र तथा ह’त्या’मा चि’नजा’नकै व्यक्तिको सं’लग्नता हुनसक्ने दा’बी प्रहरी अधिकारीहरु गर्दै आएका छन् ।